ओली राष्ट्रवादको ‘टाई टाई फिस’- जनक आश्चर्य - Sadrishya
Saturday, December 15, 2018 | info@sadrishya.com sadrishya2017@gmail.com
ओली राष्ट्रवादको ‘टाई टाई फिस’- जनक आश्चर्य
: 509 views
धेरैको विश्वास थियो, ओली दिल्लीबाटै बुआओ फोरमतर्फ हानिने छन । त्यसो नभए उनी काठमाण्डौ फर्किएकै दिन वा भोलीपल्ट त अवश्य नै चीनतर्फ लाग्ने छन् । तर, यसको ठिक विपरित ओली आफै सहभागि त के नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीसमेत उक्त फोरममा सहभागि हुन पठाएनन् । यसैलाई कुटनीतिका जानकारहरु भारतको सर्वैभन्दा ठूलो कुटनीतिक सफलता र ओलीको असफलता भनेर चित्रण गर्छन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण अप्रिल ६–८ सम्म गरे । फर्किएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा उनी स्वंयम र उनका पक्षधर बिश्लेषकले यो भ्रमणलाई अत्यन्तै सफल भनेका छन् ।
ओलीले नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकावन्दीको विरुद्धमा उभिएका थिए । उनलाई नेपाली जनताले साथ पनि दिएका थिए ।
महाकाली सन्धीमा नेपाललाई १ खर्ब २० अर्ब रुपैया फाइदा हुन्छ भनेर त्यसको पक्ष लिएका ओलीप्रति ‘भारतको मान्छे’ भन्ने आम धारणा बनेको थियो । यसको ठिक विपरित भारतको नाकावन्दीपछि उनको त्यहि अडानले एकथरीले राजा पृथ्बीनारायण शाह र महेन्द्रपछिको सवैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादीको रुपमा पनि उभ्याएका थिए ।
यस्तो राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली त्यसको जगमा टेकेर गएको प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभामा वामपन्थीहरुको गठबन्धन बनाएर ठूलो चुनावी सफलता हात पार्न सफल भए । साथै ८० प्रतिशतको सर्मथनको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्तारोहण गरे । उनको यो सफलताको कारण उनको दिल्लीसंगको स्पष्ट अडान नै थियो, विगतमा ।
कुनै निश्चित भ्रमण एजेण्डाविना नै दिल्ली गएका ओलीको भारतको औपचारिक यात्रा हतार हतारमा तय भएको थियो भन्ने स्पष्टै छ । ओलीका पुर्वबर्ति देउवाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेकोले ओली अचानक रसुवागढी पुगेर यहाँबाट चीनियाँ रेल आउँछ भनेका थिए । र, भारतलाई चेतावनी दिएको रुपमा काठमाण्डौमा उनले हल्ला फैलाएका थिए । यस्तो तमासा गर्न माहिर ओलीको चालसंग वाकिभ भारतले अप्रिल ७–११ सम्मको लागि तय भएको चीनमा बुआओ फोरममा ओली सहभागी हुनसक्ने थाहा पाएर हतारहतार भारतले यो भ्रमणको चाजोपाजो मिलाएको थियो । ओली पहिलो भ्रमणमा चीन नजाउन भनेर भारतले दिल्ली बोलायो । बडो चलाखीको साथ दिल्लीले नेपाली पत्रकारको टोली भारत भ्रमणमा बोलाएर उक्त टाृलीबाट ओली दिल्ली आउदैछन भन्ने समाचार सार्वजनिक गराउन पुग्यो ।
त्यसैले भारतले पहिला ओलीलाई औपचारिक निमन्त्रणा दिदा बुआओ फोरमसंग जुधाएर अप्रिल ८–११ को लागि भ्रमण तालिका थियो । तर त्यसवेला ओलीले ६–७ प्रस्ताव गरेको र ओलीकै तालिकाअनुसारको यो भ्रमण तय भएको थियो । धेरैको के विश्वास थियो भने संम्भवत ओली दिल्लीबाटै बुआओ फोरमतर्फ हानिने छन । त्यसो नभए उनी काठमाण्डौ फर्किएकै दिन वा भोलीपल्ट त अवश्य नै बुआओ फोरममा भाग लिन चीनतर्फ लाग्ने छन् । तर, यसको ठिक विपरित ओली आफै सहभागि मात्र भएनन नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीसमेत उक्त फोरममा सहभागि भएनन् । यो भारतको सर्वैभन्दा ठूलो कुटनीतिक सफलता हो । ओलीको चलाखी यसमा फेल भएको छ ।
धेरैको आशा र विश्वासको विपरित ओलीले चीनतर्फ नलाग्नुको पछाडी उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई फस्ल्याक फुस्लुक बनाएको भन्ने निश्कर्ष रहेको छ । ओली भारतको नाकावन्दी विरुद्ध उभिदा सांकेतिक रुपमा १३ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ अनुदान दिएको चीनले पछि नेपालसंग व्यापार तथा पारवाहन सन्धीसमेत गरेको थियो ।
भारतसंग मात्र निर्भर भएकोले भारतले नेपालमाथि व्यापार तथा पारवाहनमा थिचोमिचो गरेको र यसलाई आम नेपालीले अपमानको रुपमा लिएका थिए । चीनको अहिले सवैभन्दा महत्वाकांक्षी योजना ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ’ अन्र्तगत चाडै चीनसंग रोड र रेलमार्फत जोडिने योजना साकार हुने कल्पना थियो नेपालीको मनमा । चीनको रेल काठमाण्डौ ह्ुदै लुम्विनीसम्म पुग्ने नेपालीले कल्पना गरेको अवस्था थियो । यसबाट नेपाल भारतबाहेकबाट पनि समुन्द्रसंग जोडिने आशा र विश्वास थियो ।
ओलीको आफ्नै पनि भारत भ्रमणमा जानु अगाडिसम्म यस्तो धारणा थियो । यसको उदाहरणको रुपमा उनले भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दुकी संवाददाता सुवासिनी हैदरले लिएको अन्तरवार्तामा चीनियाँ लगानीलाई ‘ट्राप’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेकोमा त्यसप्रति विमति जनाएका थिए । यस्ता ओली भारत गएपछि किन चीन गएनन अथवा उच्च नेपाली प्रतिनिधीमण्डल चीन पठाएनन भनेर सवै नेपाली आश्चर्यचकित भएका छन् ।
यता आफ्ना नेताको मलद्धारलाई हरिद्धार ठान्ने ओलीका कार्यकर्ताहरु भने ओलीको भारत भ्रमण अत्यन्तै सफल भएको दावी गर्छन । उनको भारत भ्रमण नै एजेण्डाविहिन थियो । यस्तो अवस्थामा कसरी भ्रमण सफल भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो । रेड कार्पेट वेलकम, राजनाथ सिंहको विमानस्थलमा स्वागत र मोदीसंग भेट नै सफलता हो भने खैर यसमाथि टिप्पणी गर्नै परेन ।
ओलीले यो भ्रमणको क्रममा गरेको मुर्खता भनेको चाँही चीन जस्तो शक्तिशाली र नेपालको सहयोगी देशलाई भारतसंगको सम्बन्धमा कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा हो । अप्रिल ८–११ सम्म आयोजित बुआओ फोरम नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सहभागिता नहुनले यसैतर्फ निश्र्कष निकाल्न बाध्य पार्छ । यसबाट ओली राष्ट्रवादको ‘टाई टाई फिस’ भएको छ ।
Dec 14, 2018 लेखेर ठिक गरे कि बेठिक, तर लेखें !
Dec 13, 2018 गाउँभरि गाई फार्म
Dec 12, 2018 शासनमा "कम्प्याटिबिलिटी प्रोब्लम्स"
घ्याङफेदी मिनीट्रक दुर्घटना : मृतकको सङ्ख्या २० पुग्यो
पुर्नजन्म पाएको अनुभूत गरेको छु
मिनी ट्रक दुर्घटनामा १६ जनाको मृत्यु
अवैध रुपमा भारततर्फ चोरी निकासी गर्न राखिएको कालो मरीच बरामद
सरकारी वकिलको सम्मेलन पुसमा
रातो कमल फुल्ने सत्खलुवा तालले लोभ्याउदैछ पर्यटकलाई
लेखेर ठिक गरे कि बेठिक, तर लेखें !
शासनमा "कम्प्याटिबिलिटी प्रोब्लम्स"
महासमितिमा कांग्रेसको एज,एजेन्डा र एक्जिटकाे बहस
बैकल्पिक विधि,बेलगाम घोडा
‘क्राइम सिन’ क्लीयर हुनुपर्छ
Sep 30, 2018 Awareness on Risk Factors of Heart Attack (Myocardial Infarction) View more videos